Yimiphi imisebenzi eyenziwa umsizi wokuhlunyeleliswa kwezimilo | Ukwakheka nezifundo
Yimiphi imisebenzi eyenziwa umsizi wejele
UMaria Jose Roldan | 06/08/2021 13:16 | Ukuphikisana, Ukuphuma Komsebenzi
Umsebenzi womsizi ezikhungweni zokujezisa awaziwa kahle emphakathini, njengamanye amacala esikhungo sejele. Endabeni yomsizi, kufanele kuthiwe umsebenzi wakhe ubaluleke kakhulu maqondana nokusebenza kahle kwejele.
Umsebenzi ukhokhelwa kahle futhi iqiniso likude kakhulu nalokho abantu abakucabangayo nalokho okubonwa kumabhayisikobho. Kungashiwo ukuthi isikhundla sabasizi bezikhungo zamajele sigxile kuso ukuxazulula izinkinga ezingase zihlangane nesiboshwa empilweni yaso yansuku zonke.
1 Izidingo nezinzuzo zesikhundla somsizi wezikhungo zokujeziswa
2 Izindawo eziqukethe isikhundla somsizi wezikhungo zokujeziswa
Izidingo nezinzuzo zesikhundla somsizi wezikhungo zokujeziswa
Abantu abajoyina abasebenzi kumele bahlangabezane nezidingo eziningi ezifana nokuba umuntu onomthwalo wemfanelo futhi owemukela ngokwanele ukuthola izixazululo ezinkingeni zeziboshwa. Ngakolunye uhlangothi, kubalulekile ukuhambisana ngokuqinile nemiyalo ehlukile yabaphathi bendawo ebiyelwe. Vele, lezi zinhlobo zezikhulu kufanele zazi konke okuphathelene namalungelo nemisebenzi yeziboshwa nemithetho elawula isikhungo.
Ngokuphathelene nezinzuzo lapho usebenza njengomsizi wejele, yilokhu okulandelayo:
Ukuba isikhulu sikahulumeni, umsebenzi uzinzile futhi impilo yonke.
Umholo ungenye yezinto eziheha kakhulu abasizi basejele. Uhola cishe i-2200 euros ngenyanga, ukuba ngumholo ophakeme ngokwanele wesigaba esingaphansi kwaso.
Uhlelo lungabhekwa njengenye yezinzuzo ezinkulu zalesi sikhundla. Umuntu osebenza kulesi sikhundla akafinyeleli emahoreni angama-40 ngesonto. Ngokuqondile, kukhona cishe amahora angama-37 ngesonto angahlanganiswa ndawonye ngale ndlela akwazi ukukhulula usuku olulodwa ngesonto.
Izindawo eziqukethe isikhundla somsizi wezikhungo zokujeziswa
Ngaphakathi emzimbeni oshiwo ngenhla, kukhona uchungechunge lwezindawo ezithile lapho umsizi ezokwenza khona isethi yemisebenzi enezici zomunye nomunye:
Eyokuqala yalezi zindawo yilokho okubizwa ngokuthi ukubhekwa kwangaphandle. Iqembu elikhulu kunawo wonke labasebenzi ngaphakathi ejele kanti umsebenzi walo ukuphatha ukuphatha nokuqapha iziboshwa zesikhungo. Ngokulandelayo, zingahlukaniswa ngamaqembu amabili:
Eyodwa ibizwa nge-V1 futhi imvamisa isebenza nsuku zonke zonyaka yenza amashifu nokushintshana. Umholo wakhe uphakeme kakhulu kubo bonke abasebenzi futhi umsebenzi wakhe awukho ngaphandle kokugcina ukuthula ejele nokuqinisekisa ukuthi iziboshwa ziyahambisana nezindinganiso ezibekiwe.
Iqembu lesibili yi-V2 futhi abajwayele ukusebenza ebusuku. Amaholo aphansi kakhulu kunakwisimo se-V1 kanti umsebenzi wabo ukuqapha lezo zindawo zesikhungo ezingaphandle kwamamojula njengoba kwenzeka egumbini lokuphumula noma ekilasini lezemidlalo.
Okwesibili kwezindawo yilokho okubizwa ngokuthi kuxubile. Njengoba igama liphakamisa, laba basebenzi bazokwenza imisebenzi yezokuphatha yize begcina ukuxhumana ngqo neziboshwa. Bangakwazi ukwenza imisebenzi ephathelene nekhishi lesikhungo noma ukunakekelwa kwezinsiza ezahlukahlukene. Iholo lalaba basebenzi liphansi kakhulu kunalele lendawo yokuqala.
Indawo yesithathu isho ukusebenza kwehhovisi, Ngakho-ke, abasebenzi bayo benza imisebenzi yokuphatha kuphela futhi abanakho ukuxhumana okuqondile neziboshwa. Abekho ngaphakathi esikhungweni futhi umholo wabo uphansi kakhulu kunowabasebenzi abagcina ukuxhumana ngqo neziboshwa.
Ekugcineni, umsebenzi womsizi wesikhungo sejele awuhlangene nakancane nalokho okuvela kumabhayisikobho. Kungumsebenzi ongenabungozi kangako kunalokho ongase ukubonakale ekuboneni kokuqala, yize kunezikhathi ezinobungozi ngezikhathi ezithile. Iholo liyakhanga impela futhi kunezingqinamba ezimbalwa ezingabekwa endaweni enjalo. Njengokungathi lokhu bekunganele, uMbuso uvame ukuhlinzeka ngezindawo eziningi minyaka yonke, ngakho-ke awunazo izaba zokuzama.
Indlela ephelele ye-athikili: Ukwakheka nezifundo » Izifundo » Ukuphuma Komsebenzi » Yimiphi imisebenzi eyenziwa umsizi wejele
Igama lami ngingu-sandra, inothi liyathakazelisa kakhulu, kodwa lifushane kakhulu, angivumelani nendlela yakho yokuchaza indima yomsizi wejele. Ngivela eRiphabhuliki yase-Argentina, ngibe ngumphathi wejele iminyaka engamashumi amabili, lapha senza zonke izinhlobo zemisebenzi eshiwo ngenhla, umholo uncane kakhulu kunalokho owawubiza ngamagama ngokujwayelekile, kungaba yi-Internal kanye / noma i-Guard yangaphandle, ezokuphatha, othisha, ochwepheshe bezempilo, futhi kuya ngezikhundla ezisebenzayo. Kungumsebenzi lapho umuntu kufanele abe nobizo lomsebenzi, kepha akuphunyuki kulokho okuboniswa kumamuvi, ngoba ama-movie akhombisa ukuba ngokoqobo ngezindlela ezithile. Encwadini yakho uyenza njengokungathi iyisiqondisi sabavakashi ngentengo engcono, kepha iqiniso lihlukile. Sikhuluma ukuthi abantu yilabo abahlala lapho, nezinkinga zabo kanye nezingxabano nokuthi lowo njenge-ejenti, kumele abe nesibopho, ukuzinikela, ubizo, ukuphoqelela imithethonqubo kodwa ngaphezu kwawo wonke umthetho, ngenhlonipho nangokwethembeka.
Njenge-ejenti yejele, umsebenzi wami omkhulu ukuvikela impilo yesiboshwa ngaphakathi ejele kuze kube yilapho ijaji likhipha isinqumo sokukhululwa kwalo.
Athini amazinga esiNgisi?
Wenzani unjiniyela wekhompyutha?